Kooxda Dakedaha oo Jeenyo kutiri Cagaha dhulka dhiga siina dheereysatay Hogaanka Horyaalka? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxda Dakedaha oo Jeenyo kutiri Cagaha dhulka dhiga siina dheereysatay Hogaanka Horyaalka?
Published on April 11, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(11-4-2018) Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhacay garoonka banadir Stadium ee degmada Cabdicasiis kaa oo u dhaxeeyay kooxaha Dekedda Iyo Jeenyo wuxuuna qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League.
Qeybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay bar baro 0-0 walow labada dhinac ay soo bandhigeyn kubad ay aad ugu riyaaqeyn taageerayasha u soo daawasho tagay kulankan sidaas ayaa lagu kala maray.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambi ee ciyaarta kooxda Dekedda ayaa la soo baxday ciyaar aad u qurux badan taa oo keentay iney helaan goolka koowad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacabo Rymound ciyaarta ayuu ka dhigay 1-0 ay ku horkaceyso kooxda Dekedda.
Jeenyo ayaa weeraro ku qaaday shabaqada kooxda Dekedda balse ma u soorta galin iney goolka bar baraha ka dhaliyan.
Wiilasha Dekedda ayaa la yimid goolkii 2-aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay xidigee hore Jeenyo Feysal Xasan Xaashi taa oo ka dhigan inuu kal ciyaareedkan kooxdiise hore ka dhaliyay 3-gool, ciyaarta ayuu ka dhigay 2-0 ay ku horkaceyso kooxda Dekedda.
Ugu dambeyn waxaa bandhiga goolasha soo gaba gabeyay xidiga khadka dhexe Cabdikariin Qubaaye kaa oo gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Jeenyo Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-0 ay guusha ku raacday Wiilasha Yuu Cali ee Dekedda.
Guushan ay gaartay Dekedda waxey ka dhigan tahay iney hogaanka horyaalka sii dheereysato iyado hada ku qabaneyso 5-dhibcood oo nadiif ah.
Xigasho: C.fitaax Nani